China PET Nucleating Ukwu BT-TW03 Manufacturer na Supplier | BGT
PITA onye na-ekpo ekpo BT-TW03
PITA-TW03 bụ Polyester Nano-fiber Nucleator, meziwanye ihe eji arụ ọrụ na ihe ọkụkụ nke ọma, nwekwara usoro pụrụ iche dịka polymer dị elu nwere ike banye n'ime micropore nucleator.
Enwere ike iji ya na PET na PBT.
PITA-TW03 mepụtara na nano-fiber, onye ịdị ọcha ya dị mkpa ruo 99.8%, akụkụ ya dị nro bụ 20-50nm na ogologo bụ 500-1500nm.This ngwaahịa a bụ ụdị dị elu bara uru na nnukwu ọrụ nano nucleating nke nwere ike imeziwanye ngwongwo crystalline na nuklia nke polyester (PET, PBT).
Ọ nwere ike ịpụta nnukwu arụmọrụ dị ukwuu na kristal na ọrụ nuklia mgbe ị na-agbakwunye ya na polymer gbazee, ebe ọ bụ na a ga-akpụzi usoro srystal na-arụ ọrụ na micromesh. Ngwunye nano-fibrous a kapịrị ọnụ na-eme ka onye na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ abụọ nke na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka eriri na eriri.
Ihe omuma bara uru:
Nke gara aga: PITA-98C onye na-ekpo ọkụ
Osote: Na-agba ume Nucleator BT-20